​ओशोलाई प्रश्न : ‘म बुढो हुँदै गइरहेको छु, स्त्रीमा मेरो रुची घट्दै गइरहेको छ । के गर्नु पर्ला ?’
Saturday, 14 Apr, 2018 2:28 PM
श्रीमान, आफ्नो रुचीलाई कम हुन दिनुहोस् । यसमा गलत केही पनि छैन । अर्को कुरा के पनि ढुक्क भएर हिँड्नुहोस भने कुनै स्त्रीले तपाईँलाई याद गर्ने छैनन् ।
तर पश्चिममा, विशेष रुपले फ्रायडले जब यौन मनोविज्ञानको आफ्नो ‘पेन्डोरा बक्स’ खोले त्यसपछि मानिसहरुमा एउटा अनौठो विचारले जरा गाड्यो, तिमीलाई अन्त्यसम्म कामुक बनिरहन पर्छ भनेर किनकी सेक्स जीवनको पर्याय हो । सत्तरी बर्ष होस् या असी बर्ष तपाईले सेक्समा रुची राख्नै पर्छ । यदि तपाईमा सेक्सप्रति रुची कम हुँदै गएको छ भने यसको अर्थ जीवनप्रति तपाईको रुची पनि कम हुँदै गएको छ ।
यो विचारले सेक्स र जीवनलाई पर्यायको रुपमा अथ्र्याइदियो । यो आधारहिन कुरा हो । हो, सेक्स र जीवन एक स्तरसम्म पर्याय हो । तर पूर्ण होइन । बालककालमा यो तपाईको जीवनको पर्याय होइन । जवानीमा यसको सम्बन्ध छ । बुढेसकालमा सेक्स फेरी पर्याय होइन । जीवनका कैयौं चरण हुन्छन् । बच्चाको रुची हुँदैन । युवको रुची हुन्छ ।
तर, पश्चिमा देशहरुमा सतत् युवा बन्ने प्रयास भइरहेको छ । तपाईं बुढो बन्न पाउनु हुन्न ! मानिसहरु आफैलाई बेबकूफ बनाउदै लगेका छन् । उनीहरु सोच्दछन् म अझै युवा नै छु भनेर । नयाँ–नयाँ औषधीहरुको खोजी भइरहेको छ । केहीले त सेक्स उत्तेजना ल्याउन त्यसको प्रयोग पनि गरिरहेका छन् । ताकि उनीहरुमा युवापन बाँचिराखोस भनेर । मानिसहरु यति बेबकूफ छन् कि युवा रहनका लागि उनीहरुले कुनै पनि प्रकारको बेवकूफीलाई स्वीकार गर्छन । बुढेसकाललाई एउटा विमारीको रुपमा लिइन्छ । पश्चिममा– बुढो हुनुको मतलब तपाईँ विरामी हुनु हो । यो बास्तवमा सही छैन ।
बुढेसकालको आफ्नै सौन्दर्य छ । यसको आफ्नै सम्पदा छ । जस्तो कि जवानीको आफ्नै सौन्दर्य र सम्पदा थियो । निश्चय पनि बुढेसकालको सम्पदा यौवनको सम्पदाभन्दा अधिक मूल्यवान छ । किनकी बुढो व्यक्तिल युवा अवस्था भोगिसकेको छ । उसले सबैकुरा जानीसको, देखेको छ । हरेक अनुभवलाई उसले संगालेको छ । जीन्दगीको भ्रमलाई पनि भोगेको छ । भ्रमहरु कसरी टुट्छन् त्यसको अनुभव पनि उसित छ । बुढेसकालमा मान्छे साँच्चै बुद्विमान हुन्छ जति उ पहिला थिएन । अब उ निश्चल बन्दैछ । जब सेक्सको चाहना खतम हुन्छ तपाईमा फेरी एक प्रकारको निश्चलता आउन थाल्छ । तपाई फेरी बच्चा जस्तै बन्नुहुन्छ । एक परिपक्व बच्चा !
पूर्वीय समाजमा यो एउटा संस्कार बनेको छ कि बुढो व्यक्ति युवकको शिक्षक बन्नुपर्छ । किनकी उसले संसार भोग्यो, विकसित भयो र समझदार बनेको छ । उनीहरुले अधिक राम्रो दिशा दिन सक्छन्,अधिक प्रौढता र स्पस्टताका साथ । बुढेसकालको उमेर मृत्युको तयारीको उमेर हो । र, यो महानतम तयारी पनि हो किनकी तपाईँ अज्ञातको लामो यात्रामा जाँदै हुनुहुन्छ । यदि तपाईँले सेक्समा रुची राख्नुभयो भने यसले तपाईँलाई मृत्युबाट विचलित गरिदिने छ । पश्चिममा यही भइरहेको छ ।
पश्चिममा मान्छेहरुले अझै पनि मृत्युलाई जीवनको हिस्साको रुपमा स्वीकार गरेका छैनन् । मृत्य बर्जित छ । जसरी सय बर्ष अघिसम्म सेक्स बर्जित थियो । सय बर्ष पहिले कोही पनि सेक्सको बारेमा कुरा गर्दैनथ्यो । यसको बारेमा कुरा गर्नु या लेख्नु सम्भव थिएन । यो यति बर्जित थियो कि भिक्टोरीयाको पालामा स्त्रीहरु कुर्सीको खुट्टा पनि ढाकेर राख्थे । किनकी खुट्टा देखाउन मनाही थियो ।
मृत्युलाई स्वीकारर्नु पर्छ । मृत्युलाई स्वीकार्न सक्नुभयो भने बुढेसकाललाई पनि स्वीकार्न सक्नुहुन्छ । र, स्वीकारमा विश्राम छ । यदि तपाईको सेक्सप्रति रस सिद्वियो भने तपाईको सारा ध्यान मृत्युतिर जान्छ । याद राख्नुहोस्, सेक्स र मृत्यु विपरित ध्रुव हुन । यदि तपाईले सेक्सप्रति लगाव छोड्नु भएन भने मृत्युको लागि कतिबेला तयारी गर्नुहुन्छ ? तपार्ईको ध्यान सेक्समा नै केन्द्रीत हुन्छ र तयारीबिना मर्नुहुन्छ ।
ध्यान मृत्यको तयारी हो । अब मृत्युको लागि तयार हुुनुहोस । ध्यान गर्नुहोस । अब तपाईले स्त्रीमा रुची राख्नुहुन्न भने त्यो राम्रो हो । अब स्वयममा ध्यान केन्द्रीत गर्नुहोस् ।
मेरो सुझाव छ, तपाईले आफ्नो जीवन बाँचिसक्नुभयो । तपाईले आफ्नो शरीरको सुखको लागि, नातासम्बन्धका लागि बाँचिसक्नुभयो । जे सिक्नुपर्ने थियो सिक्नुभयो । अब आन्तरिक यात्राको लागि समय छुट्याउनुहोस ।
साभार : आशो पुस्तक, ‘दि सिक्रेट आफ सिक्रेटस्’